Guddiga maamul u sameynta gobolada dhexe oo lala dardaarmay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo R/wasaare C/weli Sheekh Axmed ayaa xalay kulan dardaaran loogu jeedinayey guddiga farsamo ee ay Xukuumadda Soomaaliya u xil saartay maamul u sameynta gobollada dhexe ee Soomaaliya la qaatay xubnaha guddigaas.
Kulankan oo ka dhacay Aqalka madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo madaxa maamullada hadda ka jira gobollada dhexe ee dalka.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Soomaaliya, Cabdullaahi Gaadax Barre, ayaa kulan ka sheegay howlaha guddiga farsamo uu qaban doonno, isagoo rajo wanaagsan ka muujiyey in shaqada uu bilaabayo guddiga in ay guul ku dhammaato.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in Xukuumadda ay si dhow ula shaqeyn doonto, isla markaana ay ka rajeyneyso in ay soo dhisaan maamulka gobollada dhexe 45-ka casho oo ay heystaan.
Madaxweynaha Soomaalia, Xasan Sheekh Maxamuud oo kulanka hadal dardaaran dheer ka jeediyey, ayaa uga mahadceliyey Xukuumadda dadaalkeeda ku aaddan sida ay uga shaqeysay sameynta guddiga farsamo ee maamul u sameynta gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa kula dardaarmay guddiga farsamo in ay si cadaalad ah oo ay ku jirto Soomaalinimo uga shaqeeyaan sidii gobollada dhexe loogu dhisi lahaa maamu gobolleed.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ku ammaanay dadka dega gobollada dhexe, sida ay u soo ceshteen nabadda oo ay isaga difaaceen Al-Shabaab, isagoo arrintaasi ku boggaadiyey guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Guddigan oo ay dhawaan dhistay xukuumadda Soomaaliya ayaa muddo 45 maalmood ah ka howl-geli doona sidii uu u fududeyn lahaa dhammaan qorshaha dhisidda maamulka gobollada dhexe, waxaana guddiga laga soo kala xulay dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee degta gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya.
Madaxda Soomaaliya oo ku farxay dilka Mareykanku sheegay inuu u geystay Amiirka Alshabaab